Dinika amin'ny rosiana tovovavy momba ny fiainana ao amin'ny Meksikana dia lavitra ny bilaogy - Ny Lahatsary Amin'ny Chat - Ny Tsara Indrindra!
Dinika amin'ny rosiana tovovavy momba ny fiainana ao amin'ny Meksikana dia lavitra ny bilaogy
Izaho Tanya, teraka sy lehibe tao Moskoa
Ny mifanohitra amin ny tanàn-dehibe maoderina amin'ny tontolo fahiny Indiana, ary ny fifangaroana kolontsaina samy hafa dia MeksikaAfaka miresaka momba izany be dia be, sy ny isan-taona dia tsy mbola ampy ny mahalala izany. Angamba izany dia tsara kokoa ny mijanona sy monina ao Meksika, araka ny Tatiana nataony, satria izy dia Nifindra avy any Moskoa izany Talaky masoandro firenena. Manaiky ho fitaomam-panahy amin'ny alalan'ny ny tantara mahaliana ny Tatiana ny hifindra any Meksika, ny fiainana traikefa sy torohevitra momba professional fialam-boly ao amin'ity firenena ity. Nandritra ny fiofanana ho mpanao gazety sy mpaka sary, dia nahazo diplaoma avy amin'ny sampam-pampianarana ny asa fanaovan-gazety ao amin'ny anjerimanontolom-panjakana amin'ny mari-pahaizana amin'ny sary fanao an-gazety. Ary izaho efa monina ao Meksika mandritra ny folo taona izao. Efa nahazo ny raharaham-barotra eto, ankizy roa miaraka ny zom-pirenena roa, sy ny Meksikana vadiny.
Izaho te-ho foana ny mpaka sary, ary rehefa niditra ny asa fanaovan-gazety Ao amin'ny Oniversiten'i MOSKOA, amin'ny lava sy ny tsy mahazatra, hafakely ny firenena nanomboka hisarika ahy, satria hitako ao amin'ny kitapom-batsy ny mpampianatra sy ny mpiara-mpianatra ao an-tsary avy amin'izao tontolo izao.
Ao amin'ny iray amin'ireo sary seminera tany Eoropa, dia nihaona tamin'ny Meksikana mpaka sary, Raul. Iza no ho nihevitra fa amin'ny folo taona aho, dia ho velona ao Meksika, dia manambady, dia mety ho roa ny ankizy sy ny fianakaviana. Fomba tsotra indrindra nahazo ny fahazoan-dalana honina sy ny zom-pirenena dia ny Meksika dia Union amin'ny Meksikana na ny fahaterahan'ny zaza iray ao amin'ny faritry ny firenena. Ianao koa dia afaka monina ao amin'ny firenena, fara fahakeliny dimy taona amin'ny fomba ofisialy ny toeram-piasana ny fisoratana anarana, ary avy eo mampihatra ny zom-pirenena. Na afaka manao ny fampiasam-bola ao amin'ny firenena ny toe-karena ary mahazo ny maha-olom-pirenena Meksikana. Izany tsy azo ampitahaina. Fiainana any Meksika dia tena samy hafa. Ohatra, eto isika dia miaina ao malalaka ny trano, fa tsy trano. Ankizy ny fanabeazana sy ny karama fanafody.
Dia ny olom-pantatra sy nitondra ahy ho any Meksika
Ny fitateram-bahoaka dia tsy ho fampandrosoana, ny zavatra rehetra dia an-tongotra.
Fanabeazana sy ny, noho izany, ny asa tsara natao ho an'ny rehetra, noho ny fahasamihafana eo amin'ny saranga sosialy.
Koa manaiky fa tsy dia lafo be mba manana mpanampy an-tranony sy ny nanny, satria izy ireo dia olona iray hafa ara-tsosialy sy ara-toekarena ny ambaratonga.
Ilaintsika ny mahita ny zava-drehetra.
Izany dia hitondra anareo ho herintaona, fara fahakeliny, mba hahita ny hitan'ny rehetra ny Meksika. Amin'ny ririnina, dia tsara kokoa ny handeha ho any amin'ny morontsiraka, ao amin'ny vanin-taona mafana-ny foibe ao amin'ny firenena sy ny tanàna. vanin-taona mafana ao Meksika ny orana, rivo-doza sy ny orambe dia afaka manohy ao amin'ny ranomasimbe. Ary ny ririnina any an-tanàna dia ho mangatsiaka loatra, ny ranomasina dia ho mahazo aina kokoa. Ankehitriny dia mampiasa maimaim-poana elektronika vahaolana, izay azo vita an-tserasera amin'ny ny Masoivoho ny namany sary.
Milaza izy ireo fa ny fanafoanana avy tsy ho ela.
Miasa afa-tsy amin'ny fahazoan-dalana amin'ny asa, izany dia tsy maintsy hatao alohan'ny hidirana ao amin'ny firenena tamin'ny fanasana ny mpampiasa. Fahalalana ny teny espaniola sy anglisy no takiana. Amin'ny fizahan-tany any amin'ny faritra, toy ny ao Karaiba, ny herim-po mba hitady asa any amin'ny fizahan-tany. Ny meksikana sy ny zavatra toy izany, ary tsy ry zareo toy ny Rosiana. Ny tena maha samy hafa dia hanemotra ny zavatra rehetra mandra-rahampitso, ary tsy ho marim-potoana, na any am-piasana na eo amin'ny fiainanao manokana. Mbola tsy nirehareha ny, ny finamanana sy ny tsiky, izay na inona na inona mihoatra noho ny fanehoana ny sivilizasiona, ary tsy ny namana, toy ny maro tamin'ny voalohany mihevitra ny rosiana. Ny fiaraha-kilasy ao izay ny fari-piainana sy toe-tsaina amin'ny tontolo iainana miankina amin'ny karazana ara-tsosialy ny mpianatra izay ikambanany. Noho izany ary antsoina hoe fanavakavaham-bolon-koditra, fa mba hanamafisana ny tahan'ny fidiram-bola. Amin'ity tranga ity, ny Meksikana no tena mahazatra, ny vadiny sy ny tompon'andraikitra ny ray aman-dreny.
Ary, mazava ho azy, vahiny Meksikana fitiavana sy mankalaza fotsy hoditra.
Raha toa ianao ka ao Eoropa-tsara kokoa. Ny Etazonia sy ny Amerikana tsy toy izany eto na, ary toy izany koa ve isika. Meksikana tia tanindrazana, no tsy sahy manakiana ny firenena mafy.
Aza manandrana ny sakafo azy ireo, na mofo, dia aleoko tacos-sakafo nentim-paharazana ny fahaiza-mahandro Meksikana.
Tsy maintsy ho fotsy tovovavy amin'ny manga maso ary avy eo dia ny Meksikana vadinao ao an-tongony.) Raha ny marina, satria na aiza na aiza ianao, dia mila mijery fa ny lehilahy toy izany koa ny toetra sy ny fiainana drafitra. Ny fanabeazana dia zaraina ho any amin'ny sekoly tsy miankina ary sekolim-panjakana. Tsy maintsy hanatrika ny kilasy faha-voalohany amin'ny sekoly ambaratonga faharoa. Bahoaka, ny sekoly dia heverina ho be malemy kokoa eo amin'ny sehatra tsy miankina, misy matetika feno kilasy, tsy misy mpampianatra, ny fitondran-tena ny mpianatra tsy azo fehezina - dia afaka ny hahita maro ny ankizy avy any amin'ny mahantra sy ireo tena sahirana manodidina. Tsy miankina zaridaina ao Meksika, ny sekoly sy ny oniversite dia tena mahafinaritra. Ny ankizy no tsy hajaina, ny antsasaky ny andro dia ampianarina amin'ny teny anglisy, ny antsasaky ny andro-amin'ny teny espaniola.
Matetika izy ireo no mampianatra antsika bebe kokoa: ny mozika, ny zavakanto ary ny siansa amin'ny teny anglisy.
Na rafitra hafa: constructivism. Sekoly tsy miankina ao Meksika, ianao dia hahita azy ireo isaky ny tsirony sy ny kitapom-bola.
Ny ankizy dia raisina ho any amin'ny fiara - ny manokana nanny manampy ny zanatsika hivoaka ny fiara, ary mandeha any an-tsekoly, eo amin'ny mihinjitra fantsona eo anoloan'ny vavahadin'ny sekoly, ary izany rehetra izany ny ray aman-dreny dia afaka hitondrana ny ankizy amin'ny fotoana.
Satria manomboka ny maraina kilasy.
Ny valin'io fanontaniana io dia tsy ho azo atao. Ny fahaiza-mahandro meksikana, noho ny isan-karazany, manaraka ny fomban-drazana sy ny harena ny andramo fomba fanamboarana tafiditra ao ny UNESCO lova iraisam-pirenena ny lisitry le amin ny teny frantsay. Manoro hevitra aho fa hiezaka mampiavaka ny lovia isaky ny faritra, indrindra fa eo amin'ny tsena izay misokatra amin'ny iray andro ny herinandro. Nanandrana ny rohy: ny Masoivoho, ny hometa, guacamole, maro tany mafana vokatra sy ny gilasy.
Nandehanany ny tsy manam-paharoa traikefa mampanan-karena ny anaty tontolo izao, no mahatonga antsika kokoa ny mandefitra ny samy hafa fomba fiainana, ary manokatra vaovao amin'ny fivelarana eo amin'izao tontolo izao sy ho an'ny tenantsika.
Ny nofinofiko dia ny hanomboka ny diany manerana an'i Meksika, ary hiresaka momba izany ao amin'ny bilaogiko. Lojika dia azo antoka mpanampy amin'ny fialan-tsasatra ao Meksika. Ao Meksika, na aiza na aiza izany mampidi-doza, zava-tsy marina; any Meksika, tsy azo antoka ny lainga. Mifantoka amin'ny forum, manampahefana ao an-toerana, sy ny voajanahary. Toy izany koa mahasoa ny zavatra manindry mandry ho anao rehefa mifidy toerana ho an'ny sakafo hariva. Nomena ny mahafinaritra ny vahoaka ho tia ity toerana ity, dia tena matsiro, mora vidy, ary tsy mety mamo.
- ny Lahatsary amin'Ny chat-Roulette tsy Misy
де Санта-Крус-де-Ла-Сьерра. Сайт знакомств Шаарында
video internet mpivady ny firaisana ara-nofo lahatsary Mampiaraka toerana amin'ny chat roulette an-tserasera avy amin'ny finday maimaim-poana Chatroulette online aoka ny hiresaka video mpivady Mampiaraka online chat roulette fisoratana anarana velona stream lehilahy mampiaraka toerana tsy misy fisoratana anarana video Mampiaraka ny vehivavy online